မည်သည့်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုပုံစံတည်ရှိသနည်း။ သူတို့အားလုံးသိလား | ခရီးသွားသတင်း
မော်နီကာဆန် | | အကြံပေးချက်များ, ယေဘုယျ
ကွဲပြားခြားနားသည် ရွှေ့ပြောင်းအမျိုးအစားများ ရန်imperရာမအလိုဆန္ဒအားဖြင့်လူသားတို့၏မူလအစ၏နိုးထအတွက်လိုက်နာပါ ဆက်သွားပါ။ ဒီစိတ်ဆန္ဒကကျွန်တော်တို့ကိုကမ္ဘာအနှံ့အပြားကိုကိုလိုနီခေတ်ကျရောက်စေတဲ့သတ္တဝါတွေကိုတိုင်များနှင့်သဲကန္တာရများအနီးရှိဒေသများ၌ပင်နေထိုင်သောလူများရှိနေစေခဲ့သည်။
ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တည်ရှိမှုအစ မှနေ၍ ကျွန်ုပ်တို့၏နေအိမ်ကိုနယ်မြေတစ်ခုတွင်အခြားတစ်ခုအဖြစ်အစားထိုးခဲ့သည်။ ဆိုလိုသည်မှာငါတို့ရွှေ့ပြောင်းခဲ့ကြပြီ လတ်တလောတိုင်းပြည်တစ်ခုသို့သွားလျှင်ကျွန်ုပ်တို့လုပ်သောအရာဖြစ်သည်၊ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အလွန်နှစ်သက်သောကြောင့်တည်းခိုနေထိုင်ရန်ဆုံးဖြတ်သည်။ ဒါပေမယ့် မည်သည့်လူသားပြောင်းရွှေ့မှုမျိုးတည်ရှိကြောင်းသင်သိပါသလား။
လူ့ရွှေ့ပြောင်းမှုများကိုအမျိုးအစားသုံးမျိုးခွဲခြားနိုင်သည် - အချိန်အရ၊ ဇာတ်ကောင်အလိုက်၊ ရွှေ့ပြောင်းမှုအမျိုးအစားတစ်ခုစီကိုကြည့်ရအောင် သူတို့ကိုပိုနားလည်ရန်သီးခြားစီ:
3 ဦး တည်ရာအရရွှေ့ပြောင်းအမျိုးအစားများ
6 ရွှေ့ပြောင်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ သိချင်စိတ်များ
ဤသို့သောရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုသည်အချိန်အကန့်အသတ်ဖြင့်သာဖြစ်သည်၊ ယာယီအမြဲတမ်းထွက်သယ်ဆောင်သောအရာအဖြစ်အဖြစ်ထည့်သွင်းစဉ်းစား အမြဲတမ်း။ မှတ်သားထိုက်သည်မှာယာယီလူသားပြောင်းရွှေ့ခြင်းဆိုသည်မှာရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားသည်သတ်မှတ်ထားသော အချိန်မှစ၍ သူ၏နေရင်းဒေသသို့ပြန်သွားမည့်သူများဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏မူရင်းနေရာမှထွက်ခွာရန်ကျွန်ုပ်တို့အားအဘယ်အရာကလှုံ့ဆော်ပေးသည်ပေါ်မူတည်သည် အတင်းအဓမ္မရွှေ့ပြောင်းခြင်း၎င်း၏အမည်ကဖော်ပြသည်မှာလူတစ် ဦး သည်ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ရန်အတွက်သူတို့၏မြေကိုစွန့်ခွာရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါမှမဟုတ် မိမိဆန္ဒအလျောက်ပြောင်းရွှေ့ခြင်း ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားကသူ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်စွာမိမိနေထိုင်ရာထွက်ခွာသောအခါဖြစ်ပါသည်။
ဤရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုအမျိုးအစားကိုကျွန်ုပ်တို့ခွဲခြားသည် ပြည်တွင်းရွှေ့ပြောင်းမှု, ထို ဦး တည်ရာကိုတူညီသောတိုင်းပြည်တွင်ဖြစ်သည့်အခါဖြစ်၏ သို့မဟုတ်နိုင်ငံတကာ သင်တစ် ဦး ကွဲပြားခြားနားတိုင်းပြည်၌ရှိကြ၏သောအခါ။
လူသားများ သူတို့သည်အမြဲနေရန်နေရာကောင်းကိုရှာဖွေကြသည်မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၎င်းတို့၏ဇာစ်မြစ်နှင့်စီးပွားရေးအခြေအနေမည်သို့ပင်ဖြစ်ပါစေ၊ မကြာသေးမီနှစ်များအတွင်းလူ ၀ င်မှုကြီးကြပ်ရေးသည်နေ့စဉ်အခြေခံအနေဖြင့်ပြောသောခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်လာသည်။ ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံများမှလူများသည်စားနပ်ရိက္ခာ၊ အလုပ်နှင့်လုံခြုံရေးအတွက်ရေကန်ကိုဖြတ်ကျော်လာကြသည်။ လူအများက၎င်းတို့သည်သင့်လျော်သောသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းများဖြင့်အမြဲတမ်းရောက်ရှိလာခြင်းမရှိကြောင်းလူတိုင်းသိကြသောကြောင့်သူတို့အများစုသည်အသက်ဆုံးရှုံးနိုင်သည်။ သို့သော်သူတို့ရရှိနိုင်သည့်အရာများစွာရှိသည်။ နောက်ဆုံးတွင်မည်သည့်နေရာသည်စစ်ဒဏ်ခံနေရသောဒေသထက်ပိုကောင်းသနည်း။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ငါတို့အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ငါတို့တစုံတယောက်သောသူသည်ခရီးစဉ်သွားဥပမာ, ဥပမာ, နယူးယောက်ဥပမာအားဖြင့်သူတို့ကသူတို့ရာသီဥတု, လူ, နေရာ, သူတို့လည်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုကြိုက်ကြောင်းထွက်လှည့် အလုပ်ရှာဖို့ သင်ထိုတွင်ခေတ္တနေထိုင်ရန်စဉ်းစားဖွယ်ရှိသည် (သို့မဟုတ်) မည်သူသိနိုင်သည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်နယူးယော့ခ်ျသို့ပြောင်းရွှေ့အခြေချသူများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏တိုင်းပြည်ရှိပြောင်းရွှေ့အခြေချသူများဖြစ်လာလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းမကြာမီကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝကိုပြproblemsနာမရှိဘဲလုပ်နိုင်သည်
ကျနော်တို့ပြောင်းရွှေ့ဖို့ရှိသည်အဘယ်ကြောင့်နောက်ထပ်အကြောင်းပြချက်သည် သဘာဝဘေးဒဏ်ငလျင်လှုပ်ခြင်း၊ ရေကြီးခြင်း၊ မိုးခေါင်ခြင်းစသည်တို့ဖြစ်ပါစေ။ အကယ်၍ သင်သည်သဘာဝဘေးအန္တရာယ်များသောနေရာတွင်နေထိုင်ပါက၎င်းတို့ကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည့်အဆောက်အအုံများဆောက်လုပ်ရန်စောင့်ဆိုင်းနိုင်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်သင်သည်အခြားကမ္ဘာ့ဒေသတစ်ခုတွင်ပိုမိုလုံခြုံသောနေထိုင်ရာနေရာကိုရှာဖွေရန်မကြာခဏရွေးချယ်သည်။ တိုင်းပြည်သို့မဟုတ်အခြား။
နေရပ်စွန့်ခွာတုန်ခါမှုများကဲ့သို့ပင်၎င်းသည်မူလနေရာနှင့် ဦး တည်ရာနေရာတို့အတွက်အကျိုးဆက်များရှိနိုင်သည်။
အပြုသဘောဆောင်သည့်အကျိုးဆက်များအားလုံးအနက်မူလရင်းမြစ်နိုင်ငံတွင်လူ ဦး ရေအလွန်နည်းပါးသောကယ်ဆယ်ရေးစခန်းများအပြင်အရင်းအမြစ်များအပေါ်လူ ဦး ရေအချိုးအစားဖိအားကိုလျှော့ချပြီးအလုပ်လက်မဲ့များလျော့နည်းသွားကြောင်းသတိပြုသင့်သည်။ ဦး တည်ရာနိုင်ငံ၏ကိစ္စတွင်၊ လူ ဦး ရေနုပျို, ယဉ်ကျေးမှုများပိုမိုမတူကွဲပြားမှုရှိပါတယ် နှင့် ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုးလာသည်.
မူရင်းနိုင်ငံအတွက်အထင်ရှားဆုံးမှာအားလုံးအထက်တွင်ရှိသည် လူ ဦး ရေအိုမင်းခြင်းနှင့်ပြည်သူ့ဘဏ္revenueာငွေကျဆင်းခြင်း။ အလုပ်လုပ်ကိုင်သောလူငယ်များသည်ပထမဆုံးထွက်ခွာရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီး၎င်းသည်မူလနေရာအတွက်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်သည်။
အခြားတစ်ဖက်တွင်, ဦး တည်ရာတိုင်းပြည်တစ် ဦး ရင်ဆိုင်ရပါလိမ့်မယ် လုပ်ခလစာလျှော့ချ အချို့သောကဏ္inများတွင်လစာနိမ့ ်၍ အလုပ်ကြိုးစားလုပ်ရန်လက်ခံထားသောရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားများအတွက်အလုပ်သမားခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းအတွက်ဖြစ်သည်။
ယခုအချိန်ထိဖော်ထုတ်ထားသည့်အရာအပြင်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုဟန်ချက်ညီမှုရှိသည်ကိုလည်းသိရှိရန်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသည် ရွှေ့ပြောင်းခွင်၎င်းသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (ထွက်ခွာသူများ) နှင့်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေး (တည်းခိုသူများ) အကြားခြားနားချက်ဖြစ်သည်။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးသည်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးထက်သာလွန်ပါကရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်မှုကိုမျှတစေသည်၊
ဆိုရှယ်လစ် Robert Owen (၁၇၇၁-၁၈၅၈) သည်ဝလေလမှဆင်းသက်လာပြီး New Harmony ဟုခေါ်သောမြို့တစ်မြို့ကို Indiana ပြည်နယ် (United States) တွင်တည်ဆောက်ရမည်။ ပြောင်းရွှေ့လာသောလူများအတွက်နေရာထိုင်ခင်းနှင့်အလုပ်လုပ်ရန်အကြံအစည်မှာအဆုံး၌၎င်းကိုမသိရှိရသေးပါ။ အရာအားလုံးရှိသော်ငြားလည်းရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူများ၏ပံ့ပိုးမှုကြောင့်နေ့အလင်းကိုမြင်တွေ့ရသောစီမံကိန်းများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ ကျနော်တို့အနက်ရောင်မီးမောင်းထိုးပြအားလုံး ဂြိုဟ်တုမြို့ကြီးများ (ချီလီရှိMaipú၊ ဖိလစ်ပိုင်ရှိQuezónသို့မဟုတ်ပီရူးမှ Belen New City ကဲ့သို့) လက်တင်အမေရိကမြို့ကြီးများ၏စီမံကိန်းဒါမှမဟုတ် ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံကဟေတီနှင့်နယ်စပ်ဒေသများအခြေချနေထိုင်ခြင်း.
လူသားတို့၏ပြောင်းရွှေ့နေထိုင်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏သံသယများကိုကျွန်ုပ်တို့ဖြေရှင်းနိုင်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - ခရီးသွားသတင်း » ခရီးသွား » အကြံပေးချက်များ » ရွှေ့ပြောင်းအမျိုးအစားများ
အဆိုပါ Tabernas သဲကန္တာရသို့မဟုတ်စပိန် Far West Touring